Kukho iikhosi ezithile ofuna ukuzenza ukuze uzalise iimfuno zokufumana idiploma okanye idigri. Ezi zifundo zidla ngokucacileyo zichazwe ngokucacileyo kwiprogram yekharityhulam okanye kwiprogram yeemfuneko zezifundo.
Iikhosi ezingazalisekanga isakhiwo esithile kwiprogram yeemfuno zeeprogram zezifundo ezikhethiweyo.
Ezinye iiprogram zee-degree ziqulethe ixesha elithile leeyure ezikhethiweyo, oko kuthetha ukuba ezi nkqubo zivumela abafundi ukuba banandipheke kwiinkalo ezimbalwa kwaye bathathe iiklasi ezithandayo-ngokungakhathaliseki ukuba iiklasi zinikwe kwizinga elithile lobunzima.
Ngokomzekelo, abafundi abakhulu kwiNgesi yesiNgesi banokufumana ithuba lokuthatha izifundo ezimbini eziphakamileyo eziphezulu ukusuka kwisebe labantu. Ezi zifundo zingabandakanya nantoni na kwi-Art Appreciation kwi-History yeJamani.
Xa abafundi befuduka esikolweni esinye beya kwesinye, banokufumanisa ukuba izifundo ezininzi ezithathileyo (ngetyala) ngokuqinisekileyo zidlulisela kwisikolo esitsha njengezikweletu ezikhethiweyo. Oku kwenzeka ukuba isikolo sesibini asinikezeli izifundo ezifundiswa kwisikolo sokuqala . Izifundo ezithunyelweyo azihambelani nakwiyiphi ikharityhulam.
Ukwahlukana Phakathi Kokuhlaziywa Nokulungiswa
Izakhono kunye neenjongo zabaSebenzi beSithandathu
Ulwazi lweChunking ukukhumbula ngeMongameli
Indlela yokudala i-Simple PowerPoint Presentation
Amaphunga abilayo e-Ethanol, iMethanol, ne-Isopropyl Utywala
Uthini uMthetho wokuThunywa koLuntu kunye noLuntu?
Izinto Ezibalulekileyo Ezilishumi Ukuze Ukwazi Ngelizwe laseNyakatho Korea
Ukuguquka kweMelika: iMfazwe yaseGermanyown
Isingeniso kwimisebenzi kwi C #
Abacwangcisi uMnu Peanut Collectibles and Values
Iimephu zeGrisi yamandulo Bonisa indlela ilizwe elaba ngayo ubukhosi
Indlela yokulungisa iMiscle ye-Skiing
Uphuhliso lwezoQoqosho lweMonopoly